Paschim Nepal, Author at Paschimnepal.com - Page 323 of 503
हटारु हिड्ने बाटोमा ‘सडक निर्माण’
दैलेख । वर्षौदेखी हटारु हिड्ने बाटोमा सडक निर्माण गरिएको छ । दुल्लु नगरपालिका–६ छिउडीस्थित बालेबजार–मेला–लुजै–तोलीपानी हुँदै तल्लोडुङ्गेश्वर जोड्न सडक निर्माण गरिएको हो । दैलेख क्षेत्र नम्बर दुईका सासंद् लक्ष्मी पोखरेलको पहलमा सडक निर्माण भएको छ । वर्षौेदेखी जुम्ला, कालीकोट र दैलेखका कुसापानी, बडलम्जी, दुल्लु आसपासका नागरिकहरु यही बाटो हिडेर ‘हाट’ जाने गर्थे । तर सासंद् पोखरेलले निर्वाचन पूर्वा
वीरेन्द्रनगरको मेयरमा कस्ले बाजी मार्ला !
सरकारले स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने घोषणा गरेसंगै सुर्खेतमा यसको सरगर्गी बढ्न थालेको छ । विभिन्न टोलका चिया पसलहरुका जमघटहरुमा अब कसले चुनाव जित्ला आकल र अनुमान एवं टिकाटिप्पणी सुरु भईसकेको छ । मुख्यतया प्रमुख तीन दल नेपाल कांग्रेस, नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रका बीचमा हुन सक्ने त्रिपक्षीय भिडन्तमा कसले बाजी मार्ने हो, त्यो त चुनाव सम्पन्न भईसकेपछि आउने परिणामले निश्चित गर्ने छ । तै पनि राजन
फिल्म शैलिमा कुटिए सह–चालक
कुटने विरुद्व प्रहरीमा जाहेरी दर्ता देउती यातायात नागरिक प्रा.लि. द्धारा संचालित फोर्स मिनि बसका सह चालक कुट्ने विरुद्ध जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा जाहेरी दर्ता गरिएको छ । बिहीबार विहान मध्यपश्चिमाञ्चल यायायात व्यवसायीका कर्मचारीहरुले फिल्मी शैलिमा कुपपिट गरेको भन्दै देउती नागरिकका सञ्चालकहरुले जाहेरी दर्ता गरेका हुन् । बिहिबार विहान ७ बजे देउती यातायात नागरिक प्रा.लिद्धारा संचालित बा ४ ख ५३३०
Feb162017 by Paschim NepalNo Comments
प्रकाशित मितिः बिहिबार, फाल्गुन ५, २०७३ |
संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास सचिव केदारबहादुर अधिकारीले ‘जिब्रो लट्पटिएको’ स्वीकारेपछि स्थानीय निकायमा आन्दोलनरत कर्मचारी र मन्त्रालयबीचको वार्ता सकारात्मक विन्दुतिर अघि बढेको छ । सचिव अधिकारीले ‘स्थानीय तहका कर्मचारीहरुलाई समायोजन गर्न मिल्दैन’ भनेर बोलेपछि विभिन्न पाँच बुँदे माग राखेर आन्दोलनमा उत्रिएका कर्मचारीहरुले चार दिनअघि सबै स्थानीय निकाय ठप्प पार्ने गरी आन्दोलन थालेका थिए । स्थानीय नि
भिडियो एक्सरे सेवा सुरु
जिल्ला अस्पताल बिजुवारमा लामो समयपछि नयाँ भिडियो एक्सरे मेसिन ल्याइएको छ । पहिलाको मेसिन बिग्रँदा झन्डै ६ महिनादेखि बिरामीले सेवा लिन पाएका छैनन् । कोटेसनमार्फत ४ लाख ९८ हजारमा मेसिन खरिद गरी मंगलबारदेखि सञ्चालनमा ल्याएको जिल्ला स्वास्थ्य प्रमुख मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट डा। कृष्ण शाहले बताए । ‘एक्सरे मेसिन बिग्रँदा महँगो शुल्क तिरेर बिरामी निजी क्लिनिक जान बाध्य थिए,’ शाहले भने, ‘अहिले सहज भएको छ ।’
जुम्लामा ट्रक दुर्घटना, तीनको मृत्यु
जुम्लाको सिंजामा ट्रक दुर्घटना हुँदा तीन जनाको मृत्यु भएको छ। दुर्घटनामा एक जना घाइते भएका छन्। बिहीबार बिहान कालिकोटको नाग्मघाटबाट सिंजाको गाठीज्युलातर्फ जाँदै गरेको ना ५ ख ९२७२ नम्बरको मिनीट्रक सिंजाको बड्की–२ को कोटीला भिरबाट खस्दा तीन जनाको घटनास्थलमै मृत्यु भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय जुम्लाले जनाएको छ। दुर्घटनामा ट्रक चालक बर्दिया जिल्लाको मैनापोखर–८ का तिर्थराम थारु, मुगु कालै–४ का रंगबहाद
कुपोषणका कारण नाबालकको मृत्यु
जाजरकोट, ५ फागुन । कुपोषणका कारण जाजरकोटमा एक नाबालकको मृत्यु भएको छ । मृत्युहुनेमा जाजरकोट पजारु–९ का १४ महिने नाबालक अनेगत नेपाली रहेको स्थानीय स्वास्थ्य संस्थाका वरिष्ठ अहेब पे्रमबहादुर शाहीले बताए । चौध महिनाका बालकको तौल पाँच केजी रहेकोमा उपचारका लागि रकम जुटाएर सदरमुकाम खलङ्गा लग्ने तयारी गर्दै गर्दा बुधबार बेलुकी उनको मृत्यु भएको स्थानीयवासी गोपाल गिरीले बताए । आमा हिरा नेपाली र बाबु
Feb162017 by Paschim Nepal1 Comment
सुर्खेतमा थपिदै ‘सुपर फास्ट यातायात’
सुर्खेत । सुर्खेतमा नयाँ सुपर फास्ट यातायात प्राईवेट लिमिटेड सञ्चालनमा आउने भएको छ । छिन्चुमा मुख्य कार्यालय रहेको सुपर फास्ट यातायात प्रालिले शुक्रबारदेखि आफ्नो सेवा शुरु गर्न लागेको बताएको छ । करिब सवा पाँच करोड लगानीका साथ यातायात क्षेत्रमा आएको प्रालिले पहिलो चरणमा जाजरकोट–सुर्खेत–नेपालगञ्ज सेवा शुरु गर्न लागेको छ । ‘सर्वसाधारणलाई सस्तो, सुलभ र भरपर्दो यातायात सेवा दिन सुर्खेतमा पहिलो पटक सुप
Feb152017 by Paschim Nepal1 Comment
मलाई क्याम्पस प्रमुख बनाउनु पर्छ : यादब
प्रकाशित मितिः बुधबार, फाल्गुन ४, २०७३ |
शिक्षा विद्याको मन्दिर हो, शिक्षामा राजनीति गरिनु हुदैँन । आम रुपमा भनिदै आएको यो विषय बुधबार आयोजित मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालयमा कार्यरत एक उप–प्राध्यापक सोनालाल यादवले ठाडो चुनौति दिए । उनकै शब्दमा मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालय इन्जिनियरिङ्ग संकाय माओवादी पार्टीको भाग हो, यहाँ सो पार्टी सम्बद्ध व्यक्तिहरुलाई नै नियुक्त गरिनु पर्छ । यसरी ठाडो रुपमा पार्टीगत रुपमा डिपार्टमेन्टहरु भागबन्डा गर
Feb152017 by Paschim NepalNo Comments
राधाकृष्ण मैनालीलाई कारवाही गर्नेबारे एमाले पोलिटब्युरोमा छलफल
माधवले कुरा उठाएपछि ओलीले भने-मैनालीले द्वेष र कुण्ठा पोखे काठमाडौं । नेकपा एमालेले पार्टी नेतृत्वविरुद्ध नियोजित रुपमा विषाक्त प्रचार गरेको भन्दै केन्द्रीय सदस्य राधाकृष्ण मैनालीमाथि कारवाही गर्ने भएको छ । बुधबारबाट शुरु भएको पोलिटब्यूरो बैठकको प्रारम्भमै मैनालीमाथि कारवाहीको प्रशंग उठेको हो । मैनालीले हालै सार्वजनिक गरेको ‘नलेखिएको इतिहास’ भन्ने आत्मकथामा व्यक्त गरेका दाबी र आरोपलाई एमालेले खा
Previous 1 … 322 323 324 … 503 Next